MONCLER VS. CANADA GOOSE: YONKE INTO EKUFUNEKA UYAZI - UHLOBO
Moncler vs. Canada Goose: Yonke into ekufuneka uyazi
Xa kuziwa ekukhetheni iimpahla zangaphandle ezifanelekileyo, kukho itoni yokuqwalaselwa ekufuneka uyigcinile engqondweni, kuba masijongane nayo: zonke iimpahla zangaphandle azifani, ngakumbi ukuba uhlala kwimozulu efikelela kumaqondo obushushu e-subzero ebusika. Umzekelo, unganakho ukubaleka ngokunxiba ibhatyi yedenim ngoDisemba eCarlifonia, kodwa ukuba uhlala kwindawo enamaxesha onyaka, uya kudinga into enzima ngakumbi, kulapho zimbini zithandwa iimpahla zangaphandle zeMonster kunye neCanada Goose zingene.
Kwaye ngelixa zombini i-Moncler kunye ne-Canada Goose zinokubonakala ngathi zifana neempawu zangaphandle zempahla, kukho okunene umahluko phakathi kwezi zimbini, esiza kungena kuzo ngezantsi. Akukaze kube kudala kakhulu ukuthenga iimpahla zangaphandle kwaye ulungiselele iinyanga ezibandayo, ke sibeke yonke into oyifunayo malunga neMoncler kunye neCanada Goose ukukunceda ukhethe idyasi yobusika efanelekileyo kuzo zonke iimfuno zakho zemozulu ebandayo.
Moncler uphawu lokunethezeka olwaziwayo ngempahla yalo yangaphandle, skiwear, kunye nokunye. I-Moncler yasekwa ngo-1952, kwaye ekuqaleni yenza iintente kunye neebhegi zokulala ngaphambi kokudlulela kwiidyasi ezomeleleyo, yiyo le nto baziwa ngayo namhlanje. Ngelixa ikomkhulu likaMoncler libekwe eMilan, e-Itali, uphawu luye lwafumaneka kwiindawo ezigcina zonke ezorhwebo, kwaye iyaqhubeka nokuba yenye yezona zikhetho zithandwayo kunye nenkulumbuso yempahla yangaphandle namhlanje.
Iibhatyi zemonor zihlala zenziwe isitayile ngakumbi kunezinye iibhatyi ezisezantsi, ezenza uphawu lube lukhulu kubantu abafuna iibhatyi zasebusika kunye neebhatyi ezibonakala zintle kwaye zihonjisiwe. Iidyasi ze-Moncler zihlala zibhityile kwaye zilungile kunezinye zeebhatyi zasebusika, ke ukuba ungumntu ozithiyileyo ubuninzi bezambatho zangaphandle zemveli, uMoncler kufuneka abe yenye yezona zinto uzikhethileyo xa kuziwa ekukhetheni uhlobo olufanelekileyo lokutyala imali.
UMoncler akathengisi nje iibhatyi nangona; zikwanazo iintlobo zokuqhekeza umoya, iivesti, kunye nezinye iimpahla zangaphandle onokuthi uzinxibe unyaka wonke, kuxhomekeke kwimozulu.
Yintoni iCanada Goose?
ICanada Goose Olunye uphawu lwangaphandle lwangaphandle oluthandwayo oluthenjwayo ngabathengi ukusukela ngo-1957. Uhlobo luthwala uluhlu lweebhatyi zasebusika kunye neebhatyi, kubandakanya neempawu zazo ibhatyi ekhukhumeleyo , echazwa njenge-ultra-lightweight and versatile kwaye yenzelwe ukuhamba nawe.
Iibhatyi zaseKhanada iGoose zihlala zixhomekeke kwisitayile sendabuko yeebhatyi zasebusika, ngakumbi iingubo zabo ezikhukhumeleyo. Nangona kunjalo, iCanada Goose ikwaphethe iibhatyi zebhombu, iibhatyi ezingaphantsi , iivesti, iingubo zemvula, nokunye okuninzi, ke nokuba yeyiphi na ibhatyi okanye idyasi oyifunayo, iCanada Goose ngokuqinisekileyo iya kuthwala into eya kulungela iimfuno zakho kunye nesimbo sakho.
Bona ngakumbi malunga - I-Jeans eSlim vs Jeans Skinny: Yonke into ekufuneka uyazi
Nguwuphi umahluko ophambili phakathi kweMoncler neCanada Goose?
Kukho umahluko omkhulu phakathi kweMoncler kunye neKhanada Goose, kwaye ngelixa uphawu olunye lungcono ngakumbi kunolunye, nokuba uyahamba nebhatyi yeMoncler okanye ibhatyi yaseKhanada Goose konke kuxhomekeke kwinto oyikhangelayo xa isiza kwimpahla yangaphandle.
Ukuya kuthi ga ngoku ngexabiso, uMoncler uza kuba yeyona ndlela ibiza kakhulu, kodwa loo nto ayithethi ukuba iCanada Goose ayibizi kakhulu. Zombini ezi zinto ziya kukuxabisa idenariyo entle, kodwa xa kuziwa kukugcina ufudumele kumaqondo obushushu angaphantsi kwengqele, uya kufuna ukutyala imali kwidyasi enokwenza kanye loo nto.
Iibhatyi ezantsi zikaMoncler zihlala zenziwe nge-90% ezantsi kunye ne-10% yeentsiba zerhanisi, ethi ngokwegama lophawu, kuthetha ukuba umoya awunakudlula edyasini, kwaye idyasi ilula kakhulu kunezinye iinkampani kodwa ishushu kakhulu nayo. Kwelinye icala, iipaki zeCanada Goose, zenziwe ngedada phantsi, elisebenza njengesixhobo esinamandla sokwenzelela ukugcina ukufudumala nakwimozulu ebanda kakhulu.
Sisebenzisa phantsi ngenxa yokuba yamkelwe njengeyona insulators yendalo ilungileyo kwihlabathi. I-ounce nganye ye-down ine-filaments ephantse ibe zizigidi ezibini ezinqamlezileyo kunye nokugqagqana ukudala iipokotho zomoya ezikhuselayo, yiyo loo nto ikugcina ufudumele, iwebhusayithi yenkampani ifunda. Uninzi lweepaki zebrendi lubonisa ulwembu (olususwayo) loboya kwi-hood ukuqinisekisa ukufudumala okungaphezulu kunye nokukhuselwa kubanda.
Ngokubhekisele ekuzinzileyo, zombini i-Moncler kunye ne-Canada Goose jackets ngokungathandabuzekiyo ziya kuhlala iminyaka, enkosi kulwakhiwo lweempawu zangaphandle zeemveliso; Nangona kunjalo, umahluko ophambili phakathi kwezi zimbini uyehla ukuya kubunzima belaphu.
Iibhatyi zemonki zenziwe ngenayiloni yaseJapan kwaye ziyakhanya ngokuthe chatha xa kuthelekiswa neepaki zeCanada Goose, ilaphu lazo elixineneyo. Nangona kunjalo, iibhatyi zaseCanada Goose ziza newaranti yobomi, ke ukuba uzingela into eqinisekisiweyo ukuba iza kuhlala, ewe, ubomi bakho bonke, iCanada Goose inokuba lukhetho olungcono kuwe.
Ungazijonga njani iiJacket zeMoncler
Ngelixa iibhatyi zeMoncler ngokuqinisekileyo zenza umsebenzi wazo xa kufikwa kukugcina ufudumele kamnandi, uyilo lwebrand lunendlela ethe kratya kwaye inesitayile kubo, ke ukuba ukhetha enye yeebhatyi ezityikityayo zikaMoncler kwindawo ehamba nayo yonke into njengombala omnyama , mhlophe, okanye ngwevu, kungcono ukuba uyinxibe esixekweni okanye unxibe yonke imihla kwiinyanga ezibandayo.
Iibhatyi ezi-puffer zikaMoncler zidibanisa kakuhle nantoni na evela Ukungaqhelekanga kwimpahla yeshishini kwaye izakukugcina ucolile kwaye unesitayile, kwaye ngenxa yokuba ibhatyi il-ultra-lightweight, awuyi kuziva ngathi uyafunxa-kunye, ungayithwala ujikeleze ungakhange uyijikeleze ngengubo enkulu ukuba iyafudumala.
Uyenza njani iJacket Canada Goose Jackets
IHelen89 / Shutterstock
Canada Goose parkas bakholisa ukuba bulkier kancinane ngaphezu Moncler iibhatyi; Nangona kunjalo, ukuba ucwangcisa ukuba sendalweni okanye uchitha ixesha elininzi kwimozulu ebandayo, I-Canada Goose iibhatyi zikulungele ukunxiba nezinye izixhobo zemozulu ezibandayo, njengebhulukhwe yekhephu.
Oko akutsho ukuba awukwazi ukwenza isitya sebhatyi yaseCanada Goose ngokwesiqhelo, ujonge yonke imihla edolophini- nangona, ukuba usiya kumnyhadala osesikweni, singacebisa ukuba sihambe nokuba yingubo yeMoncler (njengoko injalo nefashoni- phambili) okanye ipeacoat enzima yomsebenzi okanye idyasi yomsele.
Bona ngakumbi malunga - IFlannel vs Plaid: Yonke into ekufuneka uyazi
I tattoo yomyeni kunye nenkosikazi
yonke isuti emnyama ngaphandle kweqhina
Iitattoo ezintle ezintle kubafana
eyakhiwe kwiibhentshi ezinomqolo
intombi enyulu yeguadalupe tattoo
I tattoo esemikhonweni efanelekileyo yabafana
I tattoo zikajongilanga ezimnyama kunye nomhlophe